ပျံသန်းနေသောခွပ်ဒေါင်းတကောင်: လောကကြီးက မတရားဘူး
မောင်ရန်လင်း တစ်ယောက် မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် နေအိမ်အနီးရှိ ရေအိုင်ထဲတွင် ဆော့ကစားနေသည်။ ငါးကလေးများအား လိုက်လံ ဖမ်းဆီးနေသည်။ ခဏအကြာ “အား” ခနဲ အော်သံနှင့်အတူ ရေအိုင်တစ်ခုလုံး ရဲရဲတောက် နီရဲသွားသည်။ ထိုအခါမှ မိခင်ဖြစ်သူသည် အပြေးအလွှား ရောက်လာကာ မောင်ရန်လင်းအား ပွေ့ချီ၍ ကြည့်ရှုမိတော့သည်။ မောင်ရန်လင်း ခြေဖ၀ါးတစ်ခုလုံး သွေးသံရဲရဲနှင့် ဟက်တက် ကွဲနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ပုလင်းကွဲကြောင့်လား၊ သံပြားကြောင့်လားတော့ မသိ။ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ရှိ သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းသို့ ရောက်လာတော့သည်။
ဒေါက်တာ ထူးထူးကျော်နှင့် သုခကုသိုလ်ဖြစ် ဆေးခန်းမှ သူနာပြုဆရာမများက ၀ိုင်းဝန်း၍ ကူညီဖေးမ ကုသပေးတော့သည်။ ကွဲသွားသော ခြေဖ၀ါး မှ ဒဏ်ရာအား ထုံဆေးပေးကာ ဆေးထည့်၍ ချုပ်ပေးလိုက်သည်။ မောင်ရန်လင်း ခမျာ နာကျင်လွန်း၍ ငိုရှာတော့သည်။ အငိုတိတ်အောင် ၀ိုင်းဝန်း၍ ချော့မြူခြင်း၊ Pucci Cake မိသားစုမှ လှူဒါန်းထားသော ဘီစကစ်ထုတ်အား နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူကပေး၍ နာကျင်မှု ဒဏ်ရာ ပျောက်ကင်းအောင် “သတ္တိရှိတဲ့ ယောက်ျားလေးကွ၊ ဗမာ့သွေးကွ” ဟူ၍ အားပေးကာ ချော့မြူ ခဲ့ရသည်။ ဒဏ်ရာကို ချုပ်ပေးအပြီး ပိုးသတ်ဆေး ထိုးပေးကာ ဒေါက်တာ ထူးထူးကျော်နှင့် မောင်ရန်လင်း၏ မိခင်နှင့်အတူ အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးပေးခဲ့သည်။
(၂) တောင်ဒဂုံမြို့နယ်နေ ဦးကျော်ကျော်ဦးနှင့် ဇနီးဖြစ်သူတို့သည် တစ်နေကုန် စားဝတ်နေရေး အတွက် ရုန်းကန်လှုပ်ရှား ခဲ့ရသည့်အတွက် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတို့ကို အနားပေးခြင်းဖြစ်သော အိပ်စက်ခြင်းဖြင့် နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်မောကျတော့သည်။ နံနက် လင်းအားကြီး (၄း၀၀) နာရီခန့်တွင် “ဗွမ်း” ဆိုသော အသံကို ကြားမိသည်။ အိမ်အောက်မှ ငါးပွက်လေသလား၊ အိပ်မက်လေလားဟု ထင်မိကာ ပြန်လည်အိပ်စက် မိတော့သည်။ နံနက် (၅း၀၀) နာရီခန့်တွင် ခြေရင်းတွင် အိပ်နေသော မိမိတို့၏ တစ်ဦးတည်းသော သားငယ် (၉) လအရွယ် မောင်မျိုးကျော်ကျော်အား လက်ဖြင့် စမ်းမိသည်။ မရှိတော့ . . . သားငယ်လေး မရှိတော့။ အနီးနားတွင် ထ၍ ရှာမိသည်။ မရှိ။ အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ရှာမိသည်။ မရှိ။ မိမိတို့တဲအိမ်၏ ကြမ်းခင်းတွင် အပေါက်တစ်ခုရှိနေသည်။ ထိုအပေါက်ထဲသို့ ခြေထောက်ဖြင့် ထိုး၍ ရေအိုင်ထဲသို့ စမ်းကြည့်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုကို စမ်းမိသွားသည်။ အလျင်အမြန်ဖြင့် ထိုခန္ဓာအား ၀ိုင်း၍ မကြည့်သော် သားငယ်လေး မောင်မျိုးကျော်ကျော် ဖြစ်နေတော့သည်။ တစ်ဦးတည်းသော သားငယ် (၉) လအရွယ် မောင်မျိုးကျော်ကျော်သည် အိပ်နေရင်း ထိုကြမ်းပေါက်မှ ရေထဲသို့ ကျသွားခြင်း ဖြစ်တော့သည်။ သားငယ်လေး အသက်မရှိတော့။ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ မောင်မျိုးကျော်ကျော်၏ ရုပ်အလောင်းအား သွားရောက်သယ်ဆောင်ရတော့သည်။ ကျန်ရစ်သူ မိဘနှစ်ပါးနှင့်တကွ ရပ်ကွက်သူ/သားများ၊ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)က ၀န်ထမ်းများ၊ အသင်းသူ/သားများ အားလုံး ကြေကွဲကြရသည်။
ထိုအကြောင်းအရာ နှစ်ခုအား စမ်းစစ်ကြည့်ပါက မိဘတို့၏ ပေါ့ဆမှု၊ အုပ်ထိန်းခြင်း ပေါ့လျှော့မှု ဟု အပြစ်တင် မရ။ လူကြီးမိဘများသည် စားဝတ်နေရေး ကျပ်တည်းမှု၊ ဘ၀ခရီးကြမ်းကို ရုန်းကန်လှုပ်ရှားရမှု … စသည်တို့ကြောင့် မိမိတို့၏ ရင်သွေးငယ်များအား အချိန်ပြည့် ဂရုမစိုက်နိုင်ခြင်း၊ အချိန်ပြည့် မကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်တော့သည်။
ထို့ကြောင့် မျိုးဆက်သစ် ရင်သွေးငယ်များ ဆုံးရှုံးရခြင်းများသည် မိခင် ဖခင်တို့၏ အပြစ်လား … ?
မိခင် ဖခင်တို့၏ ဂရုမစိုက်မှုကြောင့်လား … ?
စီးပွားရေး ကျပ်တည်းမှုကြောင့်လား … ?
ဆိုးဝါးလှသော ဘ၀ကို ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရမှုကြောင့်လား … ?
ပတ်ဝန်ကျင်၏ ဆိုးကျိုးများကြောင့်လား … ?
မည်သို့ဖြစ်စေ … လောကကြီးကိုဘဲ အပြစ်တင်လိုက်မိတော့သည်။
Posted by HRmyanmar at 2:09 AM